Bachelor - Oniversite Hodges - Fandraisana
Sokajy taranja: licence
Mampiseho 1-9 ny valiny 15
Tongava mpanamory fiaramanidina miaraka amin'ny BS amin'ny Fianarana iraisam-pirenena momba ny fiaramanidina
Mianara mampiasa ny fahaiza-manao sy ny fiofanana momba ny fitantanan-draharaha mba hahafahan'ny mpiasa mifantoka amin'izay tena zava-dehibe - ny fahasalaman'ny marary.
Fandaharana momba ny siansa momba ny siansa
Mahazoa fahaizana sy fiofanana hifantoka amin'ny fikarakarana ny marary sy ny fikarohana amin'ny Siansa momba ny fahasalamana.
Vola - fisoratana anarana ho an'ny fararano 2021!
Omano ny tenanao amin'ny ho avy mendrika ny fampiasam-bola amin'ny BS in Finance.
Mandraisa asa mahavariana miaraka amin'ny diplaoma amin'ny Criminal Justice.
Haavo avo lenta miaraka amin'ny diplaoma fitantanana.